Ekudleni nsuku zonke noma yimuphi umuntu angeke wacabanga ngaphandle imikhiqizo okusanhlamvu. Ngesikhathi esifanayo zikhona ngisho ukudla. Ngokuphelele isenzo ezingafanele abantu ikakhulukazi abazama ukunciphisa isisindo, ngubani uhlela esikhundleni isinkwa nge imifino nezithelo. Phela, ngisho odokotela, izazi zokudla bathi zonke imikhiqizo ufulawa ziphele engengaphansi kwengu kuyinsakavukela esungulwe nsuku zonke. Yini eyigugu ukuze umkhiqizo main? Kulesi sihloko uzofunda ukuthi amavithamini equkethwe isinkwa ngezinhlobo ezahlukene kafulawa. Futhi okwenza iziphetho ichaze ewusizo futhi kudingekile imikhiqizo ngokwabo.
The main izinga omuhle lwesinkwa siwukuthi, efana okusabhontshisi, amazambane nokusanhlamvu, umthombo kufinyeleleke wamaprotheni zemifino. Futhi, okune-fibre, ama-carbohydrate (50%) kanye ukulandelela izakhi (potassium, magnesium, i-phosphorus, okusansimbi, i-calcium). Futhi lokho amavithamini equkethwe isinkwa? Ngokuyinhloko ezihlobene iqembu eyigugu B.
Ukuze bathi ukusetshenziswa imikhiqizo ebhikawozi akuxhomekile ufulawa izinhlobo Yiqiniso, akunakwenzeka. Phela yezingxenye ayingxenye umkhiqizo, ukucacisa hhayi kuphela ukubaluleka amandla, kodwa futhi nezinye izimfanelo. Ake ngokuningiliziwe property isinkwa ngofulawa zezinhlobo ezahlukene. Asiqale nge muhle kangako kodwa ababukeka ukunambitheka of baking.
Imikhiqizo, senziwe ngofulawa kakolweni: Yini amavithamini equkethwe isinkwa esenziwe kusukela lonke wokusanhlamvu bran, futhi kanjani usizo
Ufulawa eyatholakala kusukela ezinhlayiyeni iphathwa, ilahlekelwa impahla eminengi enomsebenzi omuhle. Phela, ngesikhumba isuselwe ezihlukahlukene amavithamini namaminerali. Yiziphi izici isinkwa esenziwe ngofulawa noma neobdirnoy usebenzisa bran? Yini Amavithamini kule isinkwa bayigugu kakhulu? Ikakhulukazi ewusizo kukhona imikhiqizo enjalo nokuntuleka vitamin kanye nesifo senhliziyo. Imikhiqizo anamavithamini E no-B, kanye pro-Vitamin A. By endleleni, sibonga yokuthi ukubaluleka zamandla bran is cishe encishisiwe kuqanda, isinkwa esivela ufulawa kakolweni kabanzi isisindo ukulahleka. Ngokushesha yokumatisa umzimba ngenxa ukuvuvukala, kuyasiza kakhulu futhi ingasetshenziswa "uyaxebuka" wokugaya ukudla futhi ihlanze umzimba iyonke.
Yini Amavithamini eziqukethwe isinkwa, senziwe ngofulawa rye?
imikhiqizo Gray uma ziqhathaniswa amakhekhe ezimhlophe aqukethe kathathu magnesium okuningi kasikhombisa B amavithamini kanye PP, kabili vitamin E, Four - phosphorus. Ukusetshenziswa kwabo akunakuphikwa. Ngeshwa, ngenxa ukunambitheka omuncu esinkwa se-rye is contraindicated in izifo ezithile pheshana emathunjini, kodwa kuyinto enhle futhi kunconywa kakhulu sikashukela.
Kuyini kokuhle amavithamini ku isinkwa esimhlophe?
imikhiqizo Ukolweni ngofulawa elicwengiweyo ngokucophelela futhi lusetshenziswe kuthiwa kugaywe ngokushesha futhi kugaywe kalula, ngokushesha yokumatisa umzimba nge-carbohydrate. Kodwa, ngeshwa, ba acishe musa ane-fiber, futhi nalo, futhi zonke izakhi ekhona bran futhi neobdirnom isinkwa. Ngenxa yalokho, aluhlaza namabhanisi eliconsisa zikhanga kangaka ngokubukeka, babe cishe akukho umsoco. Ngakho, musa wathumba nomunye isinkwa esimhlophe - kilojoule kuwo kuphela.
Kuyini amafutha abandayo ecindezelwe?
Manitoba lempuphu; izici, isicelo
Emikhombeni Isinkwa phansi. Ukukhiqizwa futhi ukusetshenziswa kwemizi isinkwa
200 amagremu ushukela - lena izindebe eziningi kanjani? Kala ushukela ingilazi
"Ukukhulisa uHelen": nabalingisi ngesakhiwo
Emotion Ukwahlukanisa: Izimpawu Jikelele leqembu main